Isaga Awgii Ayaa Ciyaartoyda Loo Soo Dilay, Waxaan La Jeclaan Lahaa In Uu Barcelona Yimaado-Samuel Eto'o Oo Mourinho & Barca Isku Soo Jiidaya. - Gool24.Net
Isaga Awgii Ayaa Ciyaartoyda Loo Soo Dilay, Waxaan La Jeclaan Lahaa In Uu Barcelona Yimaado-Samuel Eto’o Oo Mourinho & Barca Isku Soo Jiidaya.
Gool dhaliyihii hore ee kooxda Barcelona ee Samuel Eto’o ayaa sheegay in ay wax fiican noqon doonto haddii uu Jose Mourinho ku soo laabto Barcelona. Samuel Eto’o ayaa amaanay macalinkiisii hore ee kooxaha Inter Milan iyo Chelsea.
Samuel Eto’o ayaa sheegay in Jose Mourinho uu ka mid yahay dadka aduunka ugu fiican. Waxa kale oo uu Samuel Eto’o sheegay in Jose Mourinho uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee fariin u soo diray markii uu dhawaan ciyaaraha si rasmi ah uga fadhiistay.
Samuel Eto’o ayaa wax fiican u arka in Jose Mourinho uu ku soo laabto Barcelona oo uu afar sanadood ku soo qaatay intii u dhexaysay 1996kii ilaa 2000kii isaga oo ahaa caawiye tababare.
Laakiin Jose Mourinho ayaa ka soo shaqeeyay kooxda ay Barcelona xifiltamaan ee Real Madrid markaas oo uu colaad badan ka dhex abuuray taageerayaasha iyo ciyaartoyda labada kooxood.
Samuel Eto’o iyo Jose Mourinho ayaa qayb ka ahaa xaflada horyaalka La Liga uu qabtay oo uu ka soo qayb galay madax waynaha La Liga ee Javier Tebas.
Xidigii hore ee xulka Cameroon ee Samuel Eto’o oo ka hadlaya Jose Mourinho ayaa yidhi: “Anigu waxaan u xanuunsanayaa in ninkani uu yahay mid ka mid ah dadka kubbada cagta aduunka ugu fiican”.
“Waxaan soo gaba gabeeyay waayahaygii ciyaareed, qofkii ugu horeeyay ee fariinta ii soo diray ninkan ayuu ahaa” ayuu Eto’o ku xusay in Mourinho uu ahaa shaqsigii ugu horeeyay ee waayihiisii ciyaareed ee uu soo dhameeyay ugu hambalyeeyay.
38 sano jirkan reer Cameroon ee Samuel Eto’o ayaa ku kabftay in dhamaan ciyaartoydii Mourinho u soo ciyaartay ay isaga awgii u dhiman gaadheen wuxuuna ku kaftamay: “Dhamaan ciyaartoydu isaga ayay u soo dagaalameen, isaga ayaa loo soo dilay, ugu dhawaan dhamaantood ayaa loo soo dilay”.
Laakiin Samuel Eto’o ayaa wax fiican u arka in Jose Mourinho uu ku soo laabto goobtii uu afarta sanadood caawiye ahaanta ugu soo qaatay ee Barcelona wuxuuna yidhi: ” Waxaan Jose ka dalbanayaa in uu yimaado Mallorca, taasi way fiicnaan lahayd, waa magalada Spain ugu fiican, laakiin waxaan isaga in ka badan la jeclaan lahaa Barca”.
Jose Mourinho ayaa wali shaqo la’aan ku jira tan iyo markii laga caydhiyay shaqada Man United intii lagu jiray dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay isaga oo hadda muddo sanad ku dhaw aan wax koox ah maamulin.